Madaxweynihii hore ee Soomaaliya C/laahi Yuusuf oo Geeriyooday. - iftineducation.com
iftineducation.com – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdulaahi Yuusuf Axmad ayaa saakay aroor hore ku geeriyooday Isbitaal kuyaala Dalka Isku taga Imaaraadka Carabta halkaas uu in mudo ah ku xanuunsanayay.
Cabdulaahi Yuusuf Madaxwenihii horee ee Soomaaliya ayaana ku Geeriyooday Isbitaalka Sheekh Zaa’id halkaas uu kujiray maalmahan kadib markii uu lasoo darsay Xanuun dhinaca Sanbabada iyo Kilyaha iyadoona ugu danbeytii uu saakay aroor hore u geeriyooday.
Madaxweynaha ayaana Maalmihii danbe ku jiray Koomo sida ee sheegeen qaar kamid ah Eheladiisa kadib markii uu sii xoogeestay Xanuunka Madaxweynaha kaa oo ugu danbeytii sababtay in uu u geeriyoodo.
Madaxweyne Cabdulaahi Yuusuf ayaa ahaa nin Siyaasada Soomaaliya kusoo jiray in kabadan 40-Sano isagoona inta badan ahaa nin jabhad hasa haaatee 10-Octoper Sanadii 2004-tii Magaalada Nairobi loogu dooortay in uu noqdo Madaxweyhanah DKG ee Soomaaliya isagoona xilkaasi cadaadis kadib iska casilay sanadii 2009-kii